Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1056
Judo – «Mada 2016» : tsy mbola nisy mpandresy i Fetra sy Mihanta
Par Taratra sur 04/04/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Nifarana, ny asabotsy lasa teo, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, teo amin’ny taranja judo. Voahaja ny lôjika satria mbola manjaka tokana ireo mpikatroka efa manana ny lazany. Fihaonana nandrasan’ny rehetra, nandritra ny fifaninanam-pirenena, teo amin’ny taranja judo, ny fihaonana teo amin’ireo mpikatroka, mpila ravinahitra sy ireo mpilalao avy eto an-toerana. Anisan’izany ny teo […]
Tenisy – «Tournoi de Miami» : lasan’i Victoria Azarenka ny amboara
Norombahin’ilay teratany bielorusse, Victoria Azarenka, ny amboara teo amin’ny fiadiana ny «Tournoi WTA de Miami», taranja tenisy. Fihaonana izay notanterahina ny asabotsy lasa teo. Resiny teo amin’ny famaranana, tamin’ny seta 2 noho 0 (6/3 ; 6/2), ilay Rosianina, Svetlana Kuznetsova. Nanambara ny tenany fa tsy mora ny nahazoany ity fandresena ity, saingy tao tsara ny […]
Lomano – «Mada 2016» : fe-potoana vaovao ho an’i Estellah
Nahamontsana fe-potoana vaovao, teo amin’ny 50 m lomano tsotra, sokajy vehivavy, Rabetsara Fils Estellah, ny asabotsy lasa teo, nandritra ny fiadiana ny ho tomponadakan’i Madagasikara, natao tetsy amin’ny dobo filomanosana Ampefiloha. 27 s 40/100 ny nahavitany izany. 29 taona aty aoriana vao montsana io halavirana io, izay Ratsifandrihamanana Bako no tompony teo aloha, izay nahavita […]
Rugby – «Gold Top 8 Mada» : very ny Zef’be, tafita Ankady sy Pilo Kely ary ny FTM sy ny IRC
Fantatra avokoa ireo ekipa efatra, hiatrika ny manasa-dalana, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja rugby. Anisan’ny ekipa goavana very ny 3FB sy ny Cosfa. Ny US Ankadifotsy hifandona amin’ny FTM Manjakaray ary IRC kosa, hifanazava amin’ny TFA Anatihazo. Ireo no fandaharan-dalao, eo amin’ny manasa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja rugby na ny […]
Hitsy toraka : tohano izay mendrika
Par Taratra sur 04/04/2016 Divers, NS Malagasy
Taranja iray mahasarika olona sy mpanohana maro, ankehitriny, ny baolina kitra anaty efitrano. Anisan’izany ny etsy amin’ny Urban Futsal Andraharo, izay namarana ny fiadiana ny ho tompondakany, omaly alahady. Tsara ny fikarakarana, matihanina tanteraka ny fandaminana nasehon’ireo tomponandraikitra. Samy nilaza ho afa-po avokoa na ny mpandray anjara na ny mpijery. Izay mendrika dia mila tohanana […]
Futsal : lasan’ny Ultima-Media ny amboaran’ny “fair-play”
Nifarana, omaly tetsy amin’ny kianja Urban Futsal Andraharo, ny andiany fahatelo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka, eo amin’ity taranja baolina kitra, lalaovina anaty efitrano, ity. Nandrombaka ny amboara teo amin’ny sokajy “Elite”, ny Accord FC rehefa nandresy ny FC Cousin, tamin’ny isa tery 5 noho 4, teo amin’ny famaranana. Fihaonana tena niady satria nahitana endri-dalao […]
Minisitra Atallah Béatrice : « Hitondra tombontsoa ho antsika ny Frankofonia… »
Par Taratra sur 04/04/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Nitondra fanazavana momba ny tombontsoa ho azontsika amin’ny fandraisana ireo fihaonana sy fivoriana lehibe atao eto amintsika ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice, omaly tetsy Anosy. « Notapahin’ny governemanta fa hanara-maso sy hijery ny fanomanana ny fandraisana ireo fihaonana an-tampony ireo ny minisitera roa : ny minisiteram-panjakana misahana ny fanajariana ny tany sy ny tetikasan’ny filoham-pirenena, miaraka […]
Fifandraisana amin’ny any ivelany : hanohana antsika hametraka filaminana ny ONU
Nandray vahiny roa sosona ny filoha Rajaonarimampianina, ny faran’ny herinandro teo. Anisan’ny noraisiny ny solontena maharitry ny Firenena mikambana (ONU) eto amintsika, Violet Kakyomya Kenyana. Nambaran’ny vahiny ny fahavononany hanampy antsika. « Manamafy hatrany ny andraikiny amin’ny fanohanany an’i Madagasikara ny ONU, indrindra eo amin’ny dingan’ny fampandrosoana sy ny fametrahana filaminana ary ny fandriampahalemana », hoy ity […]
Tim : “Ilaina ny mpanohitra ara-dalàna”
Nandray ny Parlemantera afrikanina (Pan), Roger Nkodo Dang, ireo parlemantera Tim, ny zoma teo. Nambaran’ny depiote Razafimanantsoa Hanitra, nitatitra ny fihaonana, fa ilaina ny mpanohitra ara-dalàna. “Manaja ny lalàna sy rijan-tenin-dalàna rehetra misy hahafahana mandray ny fitondrana amin’ny fomba ara-dalàna sy ara-demokratika », hoy izy. Nampita hafatra koa ny vahiny ny tokony hiarahan’ny rehetra miasa. « Potika […]
Antoko Marina : « Hahitsy ny lalàmpanorenana »
Handroso hevitra any amin’ny ambaratongam-pitondrana ny antoko Marina, araka ny tapaky ny kongresy nasionalin’izy ireo natao tao Antsirabe, ny faran’ny herinandro teo. « Tokony hitondrana fanitsiana ny lalàmpanorenana sy ny lalàna mifehy ny fifidianana. Hatao 7 taona tsy azo havaozina ny fe-potoam-piasan’ny filohan’ny Repoblika… », hoy ny mpandrindra nasionaly, Ranaivoson Desiré. Ankoatra izany, nomena toromarika ireo mpizaika […]
Par Taratra sur 04/04/2016 En Bref, NS Malagasy
Miverina indray, tato ho ato, ireo peta-drindrina milaza fa mandray sy mitady olona maromaro hiasa izay mitentina amana hetsiny ny karama. Voalaza anefa fa fisolokiana avokoa no ambadik’izany satria mbola ampandoavina vola indray aza ireo olona mialoha ny handraisana azy hiasa. Tsy misy akory anefa ilay asa, araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo olona niharan’izany fisolokiana […]
1/RM3 – Toamasina : nesorina ireo tafika mibodo tranom-panjakana
Par Taratra sur 04/04/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tokantranona miaramila tsy latsaky ny 20 izay ahitana miaramila efa misotro ronono sy am-perinasa no noravana teo amin’ny manodidina ny tobin’ny miaramila 1/RM3 Analankininina Hopitalibe, ny alakamisy maraina teo. Voalazan’ny loharanom-baovao any an-toerana fa efa misotro ronono ny sasany amin’ireo miaramila monina ao kanefa mibodo trano sy tanim-panjakana. Tsy niditra tamin’ny fanesorana izany ireo tompon’andraikitra […]
Ambanja : Sprinter nivadika, olona valo naratra mafy
Olona valo indray naratra mafy. Io no vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tany Ambanja, omaly maraina. Taksiborosy Sprinter iray ho any Antsiranana ity nivadika ity… Taksiborosy an’ny kaoperativa iray eny Ambodivona hihazo an’Antsiranana ity namoa-doza ity. Naratra tamin’izany ny valo amin’ireo mpandeha. Araka ny fanazavana voaray, tsy fantatra marina izay antony nahatonga ny loza fa ilay […]
Nofohazina indray. Nifandahatra tamin’ny fandaharan’ny fahitalvitra iray, omaly, ny loholona isany, Lylison René sy Andriamandavy Riana. Nifampitsikera ny « Raharahan’ny 2009 » izy ireo, niainga amin’ilay fametrahana ny fehezam-boninkazo ny 29 marsa teo. Nahitsy ny fanehoan-kevitry ny loholona Andriamandavy Rina, nampahatsiahy fa tsy afa-bela tamin’iny krizy iny ny loholona Lylison. « Efa nahazatra ny senatera ny tahaka ireny, […]
Firongatry ny asan-dahalo : nandefasana zandary nanao “renfort” any Tsiroanomandidy
Vao mainka mihamahery vaika ny asan-dahalo any Ambaravaranala, kaominina Fierenana Tsiroanomandidy tao anatin’ny andro vitsivitsy lasa izay. Manoloana izany, nandefasana zandary nanao avy aty an-drenivohitra hanao “renfort” any Tsiroanomandidy. Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana, ny lehiben’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena Analamanga, ny Jly Rakotomahanina Florens no mitarika ireto zandary ireto. Tsiahivina fa nisy dahalo miisa […]
Par Taratra sur 04/04/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Ho an’ny mpianatra, izay hiverina an-dakilasy indray manomboka anio, taorian’ny fialan-tsasatry ny fetin’ny paska teo, fotoan’ny fampiharana ny lesona ity telo volana farany amin’ny taom-pianarana 2015-2016 ity. Tsy fotoan’ny andranandrana fa fotoana tokony hifantohana tanteraka amin’izay, satria efa mandondona dia mandondona ny fanadinana. Mba tsy ho very maina na ho faty momoka ny ezaka natao […]
Fanamboaran-dalana ho an’ny Frankofonia Tsipahin’ny mponina eny Ivato ny handravana trano sy ny fananany
Par Taratra sur 04/04/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Nampiaka-peo sy tsy nitsitsy fitenenana ireo mponina eny Ivato, manoloana ny fanatanterahana ny tetikasa fanamboaran-dalana, handraisana ny Frankofonia. Tsy mankasitraka ny hirosoana amin’izany izy ireo raha tsy tanteraka ny fepetra. Mazava ny an’ny mponina anisan’ny horavana trano, afakomaly teny Ivato tamin’ny hetsika nataon’izy ireo. « Na havily io fanamboaran-dalana io na soloina ny tranonay horavana […]
Par Taratra sur 02/04/2016 Divers, NS Français
La première étape du marathon photo baptisé «Alao sary» a bien eu lieu le 19 mars dernier. L’agence Oxygeniouz-Africa, l’organisateur de l’évènement, a ainsi dévoilé les noms des quatre gagnants, hier, chez Planète Terrasse à Ambohijatovo. Plus d’une centaine de photographes regroupés au sein de 39 équipes ont participé à cette première édition de « […]
Par Taratra sur 02/04/2016 NS Français, Opinion
La fondation Friedrich Ebert stiftung (Fes) lance la deuxième promotion de l’Académie des partis politiques (ADP 2016). Un programme destiné à renforcer les capacités des jeunes engagés dans des partis politiques en les aidant à se développer, intégrer des réseaux, prendre des décisions et contribuer au développement de leur parti respectif. Près d’une trentaine de […]
Assemblée nationale : flou sur la rallonge budgétaire
Une semaine après la décision de l’Etat d’octroyer une rallonge de trois milliards cinq cent mille ariary à l’Assemblée nationale, cette dernière attend toujours. Députés et personnel de la Chambre basse ne semblent pas encore avoir été informés officiellement. Dans tous les cas, il est impossible de déterminer si le fonds est déjà disponible ou […]
Basikety : nanampy ny federasiona ny minisiteran’ny Fampianarana
Par Taratra sur 02/04/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Taorian’ny baolina kitra, miara-miasa amin’ny taranja basikety ihany koa ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Natao omaly, teny Anosy ny fanaovan-tsonia teo aminy sy ny federasiona malagasin’ny basikety. Tanjon’ity fiaraha-miasa ity, ny fampivelarana sy fampivoarana ny taranja basikety eny anivon’ny sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa, miaraka. Amin’izao fiandohana izao, mpianatra miisa 200 avy amin’ny CEG 67 ha sy […]
Lutte – Lasa any Alger i Sedra
Par Taratra sur 02/04/2016 Divers, NS Malagasy
Nanainga omaly ary nandeha nihazo an’i Alger, nanatrika ny fifaninanana hiadiana ny tapakila handehanana hiatrika ny lalao Olympika 2016, hatao any Brezila, eo amin’ny taranja «Lutte», Randrianantoandro Sedra Faly Hery. Fihaonana nanomboka, omaly ary hifarana ny 4 avrily, ho avy izao. Hiady eo amin’ny sokajin-danja latsaky ny 65 kg izy ary araka ny fandaharam-potoana, rahampitso […]
Rugby – «Gold Top 8 Mada» : famaranana kely ny an’Ankady sy ny 3FB
Hanamarika, ity faran’ny herinandro ity, ny andro fahatelo sady farany amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja rugby. Anisan’ny lalao goavana amin’izany ny an’ny US Ankadifotsy sy ny 3FB. Ho fantatra rahampitso alahady, mandritra ny andro fahatelo sady farany amin’ny fifanintsanana, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja rugby “Gold Top 8 Mada”, ireo ekipa […]
Zavakanto Antsirabe : zava-baovao ny tetikasa « Bira compil »
Par Taratra sur 02/04/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Tsy mitsaha-mikaroka ny amin’izay hampandrosoana ny sehatry ny zavakanto ny ao an-drenivohitr’i Vakinankaratra. Eo am-panombohana ny tetikasa « Bira compil », ankehitriny, ireo mpikirakira ny tontolon’ny hira ao Antsirabe. Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra, mbola zava-baovao ho an’ny ao an-toerana izy ity. Kapila mangirana iray no mirakitra sanganasana mpanakanto na tarika iray na maro samihafa sy samy manana […]
Par Taratra sur 02/04/2016 En Bref, NS Malagasy
Tsy andramena ihany fa nahitana voamboana koa tamin’ireo hazo tafaverina avy any Nosy Maorisy tonga ao Toamasina ny 31 marsa teo. 704 ny fitambaran’ny hazo rehetra, ka 520 amin’ireo no andramena ary 184 voamboana sy hazo hafa mifangaro, araka ny vaovao nampitain’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola. Niaraka nanamarina izany an-tsoratra ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy […]
« Précédent 1 … 1 054 1 055 1 056 1 057 1 058 … 1 137 Suivant »